MOSS MUSHROOM DHIRTA IYO SAWIRADA NOOCYADA CAAMKA AH, SIDA LOO KALA SAARO MOHOVIK BEEN AH - MUSHROOMS
Ugu Weyn Ee Mushrooms
Boletus Mushroom: sharaxaadda, noocyada, kala duwanaanta
Guryaha waaweyn ee isku dhafan oo isku dhafan, waxaad ka heli kartaa boqoshaada, taas oo inta badan, waxay ku koreysaa xayawaanka, sidaas awgeed magaca - flyworm. Waxaad la kulmi kartaa bilowga xagaaga illaa dhammaadka dayrta. Dhammaan noocyada kala duwan ayaa loo tixgeliyaa la cuni karo, laakiin waxay ku wareersan yihiin khiyaano aan caadi ahayn - duurjoogta.
Tani waxay noqon doontaa maqaalkeena, sida, sida loo kala saaro duuliyaha dhabta ah ee ka yimaada hal sun ah iyo haddii ay noqon doonto mid la cuni karo ama aan la heli karin.
Ma taqaanaa? Jirka jirka fangaska waa mascadeum ku yaal dhulka. Waxay ku faafi kartaa masaafo ballaaran, halka miisaanka laftiisa uu yahay miro loogu talagalay fulinta barnaamijka taranta.
Boletus Mushroom: Qeexida Guud
Mokhovik waxaa iska leh qoyska Boletov waana qaraabo toos ah oo boletus ah. The ugu delicious ee noocyada of mokhovik yihiin motley, casaan, Polish iyo cagaaran.
Nooc kasta oo ah mushaharka dhirta ayaa leh sharaxaad ka duwan, laakiin inta badan waa furfuran yahay, qoyan wax yar, iyo dildilaaca ayaa muuqda maqaarka da'da. Cabbiradu waxay isbeddelaan marka ay koraan, laakiin waxay noqon kartaa ilaa 9 cm dhexroor.
Sulfil mushqada - caddaan, jaalle, casaan, ama, noocyada badan, buluug. Waa suurtagal in la barto midab meel ka mid ah qaybta. Dhammaan kabaha boqoshaada, sida duufaanta, waxay leeyihiin qayb hoose xuubka (dusha sare ee lakabka laf-dhabarta ee unugyada is-ka-soo-baxa waa mid googo'an). Wareegtadu waxay tahay tuubo, oo godadka tuubooyinka ayaa ku filan. Waxay noqon karaan midabyo kala duwan: jaalle, cagaaran ama casaan.
Muuqaal aad u kala duwan oo ka mid ah duulimaadka noocyada kale ee boqoshaada ayaa ah in markaad riixdid qoorgooyaha, buluuggu wuxuu ku yaalaa meeshii la xidhiidhay. Dareemo been ah ayaa laga heli karaa sharraxaad kale, laakiin waxay aad u la mid yihiin, taas oo aan ka hadli doono wax yar ka dib.
Lugta Mushta rusheeyeen ama siman, kuna xiran noocyada. Waxay ku koraysaa ilaa 8 cm, budada xayawaanka waxay soo gashaa siyaalo kala duwan (tusaale, buni).
Ma taqaanaa? Musqus kasta wuxuu ka kooban yahay qiyaastii 90% biyaha.
Noocyada caadiga ah ee flywheel leh sharaxaad
Waxaa jira qiyaastii 18 nooc oo ah fangaska haragga. Sidaa darteed, qaybaha soo socda, waxaad baran doontaa sida lowska cowska iyo waxa ay kala duwan yihiin.
Ma taqaanaa? Mushrooms waxay soo saartaa fitamiin D, haddii, dabcan, waxay leeyihiin midabo qorrax leh. Midabka khaangaarka ayaa ku xiran arintan.
Mokhovik cagaar waa wakiilka ugu caansan uguna caansan noociisa. Waxaa lagu aqoonsan karaa daboolka dahabka leh, kaas oo ah 10 cm dhexroorka, daboolkiisu waa sujuud iyo barkin-qaabeeya. Lugta cagaaran ee cagaaran waa cylindrical waxayna fidisaa saldhigga. Waxay gaadhaysaa ilaa 9 cm, 3 cm dhumucdiisuna waa la dhimi karaa, waana ka fududahay daboolka fangaska, marka laga reebo hooska casaanka ah. Qoyaanka ee cagaarka cagaaran waa cufan iyo caddaan, laakiin marka la gooyo, waxay noqotaa mid buluug ah.
Waxaad la kulmi kartaa boqoshaada xeebaha, meel u dhow waddooyinka iyo kaymaha, halkaasoo ay ka korayso bartamihii May ilaa horraantii Oktoobar.
Kala duwanaantani waa la shiilay, la kariyey, la qaboojiyey oo la qaboojiyey.
Waa muhiim! Cagaarka Mokhovik aan la qalajin, sida kaydinta dheer waxay u noqotaa madow.
Diyaarad jilicsan oo jaale ah
Aqoonyahanadu waxay kuxiraan jilbaal huruudka ah ee jilicsan ee Maslyat, laakiin sida ay muujinayaan calaamadaha dibadda maahan sida bacdi.
Kabaha miisaanka ayaa leh midab jilicsan oo jilicsan oo jilicsan. Cabbirka Cap - 140 mm dhexroor. Dusha sare ayuu u burburiyaa, iyo da'da, furka ayaa is beddelaya midabka: tusaale ahaan, fangaska dhalinyaradu waxay leeyihiin caleemo huruud ah, ka dibna noqdaan kuwo guduudan, iyo bisaylka ay helayaan midab khafiif ah.
Koofiyadu waa si liidata oo laga soocayo saxarka, iyo marka la cadaadiyo buluug. Lugta fangasku waxay u egtahay boodh oo waxay gaartaa dhererka qiyaastii 90 mm, iyadoo leh dhumuc ilaa 35 mm. Waxay leedahay midab jaalle ah. Saxarka fangaska waa mid adag oo iftiin leh.
Waxaad la kulmi kartaa boqoshaada qoryaha waaweyn ama isku dhafan laga bilaabo Julaay ilaa Oktoobar.
Mokhovik Yellow-brown waa la wada baabbi'in karaa la shiilay, cusbayn, ama la kariyey. Sidoo kale waa la qalajin karaa.
Ma taqaanaa? Dalka Swiserland, waxaa laga helaa boqoshaada da'da qiyaastii 1000 sano. Waa malab, 800x500 mitir oo cabbir ah, iyo mycelium wuxuu heystaa 35 hektar oo ka mid ah aagga National Park of thepasspass.
Mokhovik casaan oo loo yaqaano dad badan oo sax ah sababtoo ah midabkiisa, iyo ku dhawaad ​​qof kastaa wuu ogyahay meesha uu korayo. Sidaa awgeed, waxaa badanaa laga helaa keynta qallafsan ee cagaarka ah ama cawska hooseeya.
Daboolka fangaska waa barkin-qaabeeya oo gaadhaya 8 cm dhexroor. Midabka fangaska waa mid qotoma oo casaan ah, gumaarka ayaa ah huruud, laakiin si tartiib tartiib ah ayuu u laabaa buluug marka la cadaadiyo. Qeybta dhirta ee caleemaha waa cylindrical waxayna koraa illaa 10 cm oo dherer ah iyo illaa 1 cm oo dhumucdiis. Ka baxsan, hoosta albaabka, waa jaalaha, oo u dhaw saldhiga wuxuu noqonayaa casaan-casaan. Qiiqa ee likaha ayaa ah cufan iyo jaale.
Waxaad la kulmi kartaa boqoshaada laga bilaabo Agoosto ilaa Sebtembar. Noockan nooca flyworm wuxuu leeyahay ur wacan, laakiin waa ka fiicantahay in la kariyo isla markiiba, maaddaama uu mugdi ku dhaco marka qalajinta oo aanu ku habbooneyn kaydinta.
Musqulaha lafaha (bunka)
Musqul luuqadeed oo leh lugta cagaarka ah iyo furka bunka. Daboolkiisu wuxuu gaarayaa 20 cm dhexdhexaad ah waxaana loo qaabeeyey sida barkin bunni ah oo mugdi ah. Marka la cadaadiyo dusha sare ee buluug ah, buluug ama buluug-bunni-brown ayaa muuqda. Geediga waa cufan, oo u eg boodh oo wuxuu gaaraa ilaa 14 cm oo dherer iyo ilaa 4 cm oo dhumucdiis. Marka la cadaadiyo buluug. Qumaanka ee fangasku waxay cufan yihiin ukunta ama urta urta.
Mocovic Tani waa mid ka mid ah boqoshaada ugu caansan la cuni karo, iyo waxaa loo isticmaalaa in cusub, la qalajiyey, cusbayn, la qaado iyo foomka barafoobay.
Ma taqaanaa? Qoyaan badani waxay ka kooban yihiin walxo sababaya xaalad ah dabacsanaan iyo muuqaal. Tan waxaa loo yaqaanay gabayadii hore iyo Vikings, kuwaas oo u isticmaalay hantida si ay u qabtaan dhaqammada (gaar ahaan, si ay u dhiiri geliyaan oo ay ula dagaallamaan cadowga oo leh dhammaan cabsida iyo awooddooda).
Waxaad la kulmi kartaa sida mushkilada ah ee kaymaha isku dhafan oo qallafsan, laakiin hawshu waxay noqotaa mid aad u adag, sababtoo ah waxaad u baahan tahay inaad si fiican u ogaato marka boqoshaada Polish ay koraan aaggaaga. Tusaale ahaan, Galbeedka Yurub, boqoshaada waxaa laga helaa Luulyo ilaa Noofembar, Belarus - laga bilaabo Agoosto ilaa Nofembar, gobolka Moscow - laga bilaabo bilawga Luulyo ilaa dhammaadka Oktoobar, iyo Ukrayna - laga bilaabo Julaay ilaa Oktoobar.
Waxay ku dhacdaa kaymaha adagtahay iyo kaymaha laga bilaabo Julaay ilaa Oktoobar. Daboolka fangaska waa mid weyn, fareem, caajis iyo dildilaacyo, kaas oo u adeegay aasaas magaciisa. Inta u dhaxaysa iyaga waxaad arki kartaa jidh cadaan iyo casaan. Cap wuxuu gaaraa 10 cm dhexroor. Lugta fangaska waxay leedahay qaabka cylindrical iyo midabka huruudka ah. Xagga hoose ee salka, midabka lugaha ayaa isbedelaaya casaan. Lugta ayaa gaareysa 6 cm oo dherer ah ilaa 2 cm oo dhumucdiis. Hilibka duufaantu waa mid cad ama huruud ah, oo casaan ku leh saldhigga lugta, oo wuxuu buluug kuusku jeexjeexay ka dibna dildillaacaa.
Faaruusta xayawaanka fungus ayaa ugu wanaagsan in la daayo dhallinyaro, maadaama ay leedahay cufnaan saxarada ee suxuunta. Waa la qalajin karaa, la qaboojiyey, la shiilay oo la cusbaynayaa.
Mossy Parasitic: Sida loo kala saaro Mohovik la cuni karo iyada mataan
Inta badan dhulka, halkaas oo boletus koraan, waxaad ka heli kartaa boqoshaada xaaladaha si degan oo la cuni karo - Moss Mire dijitaalka. Inta badan waxay ku koraan goobta bogga ama qafiska. Mushinka ma lehan boqoshaada sunta ah, inkastoo ay leedahay dhadhan aan fiicnayn (ma jiraan wax sun ah oo ku jira saxarka).
Haddii aad si taxadar leh u soo qaadatid duullaan aan sax ahayn, ha ka welwelin. Dhammaan noocyada eeyaha been abuurka ah waxay leeyihiin dhadhan qadhaadh ah. Mushaharadaan labaduba waa mid aad u yar, xajmiguna waa 5cm dhexdhexaad ah, wax walbana ma urin, mana jirto cid buluug ah. Qaar badan oo ka mid ah dadka wax soo iibsada ayaa isku dayey in ay iska ilaaliyaan.
Waxaa ka mid ah mokhovikov been ah waxaa ka mid ah iyo caydi, basbaas iyo fungus chestnut.
Mushta kalluunka wuxuu leeyahay qaab isku dhafan oo midab casaan ah. Dhexdhexaadku wuxuu gaaraa 8 cm, jidhku waa caddaan mana beddelayo qaybta. Lugta adag, oo u eg cilil, iyo midabkiisu waxay la mid tahay midabka furka. Cabbirka lugta waa 3,5 illaa 3 cm.
Waa miisaanka laf-dhabarka oo inta badan lagu wareersan yahay boqoshaada Polish, kaliya maaha mid sumow. Si kastaba ha noqotee, waxa badanaa lagu wareersan karaa boqoshaada shaydaanka oo ah sun ku filan.
Mushinka wuxuu dhacaa laga bilaabo Juun ilaa Oktoobar. Waxay u egtahay caddaan, maadaama ay leedahay lug weyn oo adag. Qeybta fangasku waxay ku jirtaa naqshad jajab ah oo ay ku jirto maaddada casaan leh oo dhadhan qadhaadh leh: xitaa haddii aad taabatid walaxan caarada afkaaga, waxaad dareemi doontaa dareen xoog leh oo gubasho leh.
Sidoo kale, fangaskaan waxaa lagu kala sooci karaa hal muuqaal: xajka cagaarka ah (flyworm) oo aan waxyeello u geysan cayayaanka.
Mushroom Pepper wuxuu leeyahay daboolo, dhexroorka kaas oo ah 7 cm. Midabka waa midab khafiif ah. Jidhka koofiyadu waa dabacsan yahay oo jaale ah, laakiin waa la jarjaraa. Nafteeda dhadhankiisu waa sida baraf cad oo kale.
Lugta fangasku waxay gaartaa 8 cm oo dherer ah iyo ilaa 2 cm oo dhumucdiis. Qaab dhismeedka, waxay u egtahay boodh gilgil ah, midabka midabkuna waa isku mid sida kan ugu sarreeya, oo kaliya saldhigga jaalaha ah. Inta badan waxaa loo tixgeliyaa duullaan. Wuxuu yahay sun.
Mushaharka maqnaanta waa mid aad u dhadhan, sharaxaadkeena iyo sawirkayaga ayaa kaa caawin doona inaad ka hesho kaynta, iyada oo aan lagu jahwareerin isku-dhejiye been ah.
Hilibka lo'da ee lo'da
Noocyo tufaaxa xagaaga
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Mushrooms 2019